के जनावरले पनि शोक मनाउँछन्? - नयाँपुल अनलाइन डटकम
बीबीसी । अगस्ट २०१८ मा ब्यांकूवर द्विपको तटको नजिकै शिकारी व्हेलको एक बच्चाको मृत्यु भयो । उसकी आमा (तहलका) १७ दिनसम्म आफ्नो बच्चाको शवसँगै देखिई । दुई वर्ष पहिला जाम्बियाको चिम्फुन्शी वन्यजन्तु अनागालय ट्रस्टमा नोएल नामकी आमा चिपाञ्जी आफ्नो बच्चा थोमसको शवको दाँत सफा गरिरहेको देखियो ।
हात्ति आफ्नो परिवारका सदस्यको अन्तिम अवेशससम्म पटक पटक आएर हाडहरुलाई फर्काएर हेर्छन । यी सबैभन्दा धेरै नाटकीय घटना १९७२ को छ । फ्लिन्ट नामको एक युवा चिम्पाञ्जी आफ्नाी आमा फ्लोको निधनले यति दुःखी भयोकी उसले खाना पनि छोडिदियो र समूहमा अरुसँग भेटघाट पनि बन्द गरिदियो । उ बाँच्न सकेन । आमाको मृत्युको एक महिनापछि उसको पनि मृत्यु भयो ।
शोकमा आफ्नो ज्यान दिन सजिलो नहोस तर एक कुरा त हुन्छ, जस्तोकी डाक्टर बारबरा जे किंग भनिन्छन्, ‘प्रेम गर्नु र शोक मनाउनु मानिसमा मात्र सिमित छैन । यो भावना जनावरहरुमा पनि हुन्छ ।’ डा. किंग विलियम एण्ड म्यारी कलेजमा मानव विज्ञानकी रिटायर प्रोफेसर हुन् । उसले ‘हाउ एनिमल्स ग्रीभ’ नामक पुस्तक लेखेकी छन् । डार्भिनले पनि स्वीकार गरेकी थिएकी जनावर पनि खुशी र दुःख जस्ता भावनाका लागि सक्षम हुन्छन् । प्लिनी द एल्डरले हात्तिको शोक मनाउने कथा उल्लेख गरेका थिए ।
तर पनि गएका दुई शताब्दीदेखि वैज्ञानिकहरु र दार्शनिक कुनै मृत जनावरप्रति अन्य जनावरले शोक मनाउँछन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्न हिचकिचाउँछन् । अध्ययनका क्रममा डा. किंगले अनुभव गरिन् – हामी मानिसहरु कुनै जनावरमा मानवीय लक्षण र भावना हुने कुरा स्वीकार गर्दैनौं । यसैले उनले एक मापदण्ड बनाइन् । उनले भनिन्, ‘यदि मृत जनावरको कुनै नजिकको नातेदार समाजबाट आफुलाई टाढा राख्छ, खाना छोड्छ र सुत्न पनि छोड्छ, कतै आवतजावत गर्न पनि छाड्छ र आफ्नो प्रजातिका अनुसार भावाना प्रकट गर्छ भने यसलाई हामी जनावरहरुमा मृत्युका प्रति भावानात्मक प्रतिक्रियाको व्यापक प्रमान मान्न सक्छौं ।’
डा. स्विफ्ट भन्छिन्, ‘मृतकहरुमा ध्यान दिने हो भने तपाईँला यो थाहा पाउन सहयोग हुन्छकी तपाई कसरी मर्नु हुन्छ – यस कारण यस्ता कुराबाट टाढै बस्नुहोस ।’ आफ्नो क्रमिक विकासलाई बुझ्नका लागि यस व्यवहारको उत्पत्ति र यसमा भएका परिवर्तनबारे बुझ्नु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । जनावहरुमा शोकको कारणको बुझाइले हामीलाई आफ्नो शोकबारे बुझ्न सहयोग पुग्नेछ । मृत्युप्रति हाम्रा प्रतिक्रियाहरु जनावरहरु जस्तै हुन्छ । मानिसहरुको जस्तै जनावरहरुमा पनि कम वा धेरै हुन सक्छ । जुन प्रजातिहरु सामाजिक छन्, उनीहरुको प्रतिक्रिया धेरै गहिरो हुन्छ जुन शोक मनाएको जस्तो हुन्छ ।
टेथिस रिसर्त इन्टिट्युको फण्डबाट सञ्चालित ायोनियन प्रोजेक्टका डाक्टर जोन गोञ्जाल्भोले डफिल्नहरुलाई तीन पटक मृत बच्चाको रेखदेख गरेको देखेका छन् । दुई पटक बच्चाकी आमा डल्फिन उसको शवलाई कैयौं दिनसम्म आफैसँग राख्छे र अर्को पटक पूरा समूह मर्दा बच्चालई जीवित राख्ने प्रयास गर्दै बच्चालाई पानीको सतहसम्म राखेको उनले देखेका छन् । बच्चाको मृत्यु र उ डुबे पनि उनी त्यस क्षेत्रमा बसिरहे ।
डा. गोञ्जाल्भो भन्छन्, ‘शोकको सम्बन्ध नोक्सानको विचारसँग हुन्छ । आमा बच्चाको शवलाई कैयौं दिनसम्म आफु सँगै राख्छे किनकी बच्चा नवजात हुन्छ । उसको मृत्यु अप्रत्याशित र अचानक भएको थियो ।’ आमालाई शोकबाट उबर्न लामो समय लाग्छ । तर, जब समूहका कुनै सदस्यको रेखदेखमा केही समय लाग्यो भने उसको मृत्युले राहत मिल्छ । यसैले शवलाई हप्तौसम्म कुर्नुभन्दा आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँछन् ।
कयौं वर्षसम्म चिम्पाञ्जी, बोनोबोस, गुरिल्ला, र अन्य प्राइमेट्सको अध्ययन गरेकी डा. किंग भन्छिन्, ‘भाले चिम्पाञ्जी केही आक्रामक हुन सक्छन् ।’ अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयकी डा. डोरा बिरोले दुई पटक चिम्पाञ्जीलाई शवसँग जोडिएको देखेकी छन् । उनका लागि यसको मतलब निकै गहिरो छ । उनी भन्छिन्, ‘बच्चाहरुको मृत्युको अवधारण पूर्णरुपमा बुझ्ना लामो समय लाग्छ । यो स्वभाविक रुपले आउँदैन । हामी यसलाई अनुभवबाट प्राप्त गर्छौं ।’
मनोवैज्ञानिकरुले मृत्युका चार अनिवार्य कुराको पहिचान गरेका छन् – यसबाट फेरि जीवित हुन सकिँदैन, मृतकले कुनै प्रतिक्रिया दिन सक्दैन, मृत्युको जैविक कारण र सार्वभौमिकता (सबै जीव एक दिन मर्छन्) । उनी भन्छिन्, ‘हामीले कहिले र कुन अवस्गामा यी कुरालाई बुझेँउ, यो थाहा पाउन आवश्यक छ । गैर मानवीय जीव यी कुरालाई कति बुझ्छन्, यसले हाम्रो अनुभुतिको विकासवादी उत्पत्तिको बारेमा धेरै कुरा पत्ता लाग्छ ।’
डा. किग जनावरहरुको शोकको अध्ययनको आवश्यकताको र्को कारण भन्छिन्, ‘यो पशु कल्याणको मुद्दामात्र होइन, यो जनावरको अधिकारसँग जोडिएको विषय पनि हो ।’ ‘यदि हामी जनावरहरुको भावनाको गहिराईको बुझ्छौ भने हामी संसारमा चिडियाखाना र बूचडखानाको अस्तित्वमा प्रश्न उठाउने छौं र त्यो व्यवस्थाबारे फेरि सोच्नेछौं ।’ ‘जुन दुःख हामी महसु गर्छौ, त्यस्तै दुःख संसारका सबै किसिमका जनावर पनि महसुस गर्छन् ।’ (बीबीसी हिन्दीबाट भाषानुवाद)
आकस्मिक रुपमा प्रहरी परिचालन गर्ने विषयमा गृह सचिव र प्रहरी महानिरीक्षकबीच ‘विवाद’
शैक्षिक र कृषि क्षेत्रलाई प्राथामिकता दिदैं छिपहरमाई गाउँपालिका
फतुवा विजयापुर नगरपालिकामा निःशुल्क विजुली बत्तिः भुक्तानी नगरले गरिदिने